Brezila: Momba ny Fanokafana Ny Tahirim-Bakoky Ny Fitondrana Jadona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2011 8:40 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, русский, 繁體中文, 简体中文, Español, Français, Português
Naharitra 21 taona katroka ny fitondrana jadona miaramila tany Brezila, nanomboka tamin'ny 1 Aprily 1964 (Andron'ny Lainga any Brezila, izay nahatonga ny tafika hisafidy ny andro nialoha azy, 31 Martsa ho andron'ny fanonganam-panjakana) ka hatramin'ny 1 Janoary 1985. Nandritra io fotoanan'ny famoretana henjana ara-politika io, 380 no olona maty [pt] (amin'ny ampahany betsaka dia ireo mpanao ady anaty akata avy amin'ny elatra havia nanohitra ny jadona, saingy maro mpianatra sy olona tsotra izay tsy nankasitraka ny fitondrana), ka tamin'ireo dia 147 no tsy mbola hita popoka ary tsy misy zavatra fantatra ny amin'izay niafaran'ny nofo mangatsiak'izy ireny.
An'arivony ireo Breziliana nitondra faisana tamin'ny fampijaliana an-jambany sy ny fisamborana tsy amin'antony, tafiditra anatin'izany [pt] ny vehivavy nitondra vohoka, ary ankizy koa amin'ny tranga maro, ary nisy tamin'ireo zanaka lahy na zanaka vavin'ireo gadra politika no nanatri-maso [pt] ireny fotoana fampijaliana ireny.
Cartoon by @tonoise, under license CC 2.0
Ny 28 Aogositra 1979, ny mpanao jadona tamin'izany fotoana , João Figueiredo, dia namoaka ny lalàna laharana 6683, fantatra amin'ny hoe Lei da Anistia [Lalàna famotsoran-keloka, pt] izay resaka fotsiny ny hoe namela ireo sivily sy ireo miaramila tafiditra aminà heloka bevava natao nandritra io vanim-potoana io, fa hisongonana mialoha sahady ny ho fiafaran'ny jadona sy ny mety hisian'ny fanenjehana ara-pitsarana hahazo ireo nahavita heloka bevava.
Ny Kolonely Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra [pt] no hany miaramila tokana notsaraina sy nohelohina[pt] tamin'ny 9 Oktobra 2008, notondroina tamin'ny fomba ofisialy ho ny mpampijaly, na dia fanambaràna fotsiny aza fanamelohana io, fa tsy narahana fandoavana onitra na fanagadràna.
Saingy 25 taona taorian'ny nifaranan'ny jadona, hatramin'izao tsy mbola nisy voasazy na iray aza ary ny tahirim-bakoky ny tafika mandrakotra io fe-potoana io dia mbola mikatona foana, manakana ny fahafahan'ny fianakavian'ireo olona 147 tsy hita popoka hanao fandevenana mendrika ny malalany sy hahafantatra ny marina.
Mifototra amin'io, misy bilaogy iray ifarimbonana nokarakaraina [pt] tamin'ny Febroary mba hangatahana ny hanokafana ireo tahirim-bakoky ny mpitondra jadona, ka tafiditra ao anatin'izany ny Filohan'ny Repoblika, Dilma Rousseff, izy tenany izay niharan'ny fampijaliana nandritra io fe-potoana io ary niady teo anilan'ireo mpanao ady anaty akata nanohitra ny fitondrana tsy refesi-mandidy.
Niara de Oliveira, avy ao amin'ny Pimenta com Limão [Pepper with Lemon], mpamorona ilay bilaogy ifarimbonana, dia nanome ny antony [pt]:
Mba tsy hisy intsony mihitsy ray / reny maty tsy nahafantatra akory izay niafaran'ny fitondrana jadona miaramila sy ny nomen'ny governemanta breziliana ho an'ireo taranany, ary mba hatao ho amin'ny sehatra azon'ny besinimaro jerena ny antontan-taratasy nafenina hatrizay, ary mba ho fantatra ireo mpampijaly sy mpamono olona ka hisazy.
Raha tsorina dia tsy misy na iza na iza afaka hanorina demaokrasia feno sy lafatra amboninà taolam-paty maro afenina anaty vatasarihana toy izany.
Gabriel Pinheiro manamarika [pt] izay eritreretiny hitranga amin'ny fanehoan-kevitr'i Dilma Rousseff:
Ny andro nanandratana azy ho Filohan'i Brezila, nihetsi-po i Rousseff raha nahatsiaro ireo nifanome tànana niara-nitolona taminy nefa “lavo am-pandehanana” nanohitra ny fitondrana miaramila. Fa ambonin'izany, nanasa ireo niara-nifonja taminy izy hanatrika ny lanonana fanosorana azy ho filoha. Ny fankasitrahana olona iray tao anatin'ny tolona tamin'ity fifidiana ity dia mazava: izy koa izao no filoha faratampon'ny andian-tafika rehetra. Noho ireo sy ny antony maro hafa, be tamin'ireo nifidy azy, isan'ireny marina tokoa aho, no nametraka ny fitokisany amin'i Dilma fa handray zotra hafa sy mendrika izy mikasika ireo tahirim-bakoky ny tafika sy ny fanadihadiana mikasika ireo heloka bevava notanterahan'ny fanjakana nandritra izany fe-potoana izany.
Leandro Parteniani tsy mahita antony [pt] hanohizana ny hitazonana ireo tahirim-bakoka ireo ho toy ny tsiambaratelo:
[…] Tsy mandeha amin'ny tokony ho izy mihitsy ny fahitàna hoe , 25 taona aty aorian'ny fametrahana demaokrasia, dia mbola hisy tahirin-kevitra miaramila atao ho tsiambaratelo, tena saropady sy voafehifehy. Ny famelàna an'ireny antontan-taratasy ireny hijanona foana ho tsiambaratelo, tsy azon'ny mason'ny vahoaka jerena akory, dia fandàvana ny zo fototra tokony ho an'ny mpiara-belona sy fanohintohinana ny fandrosoan'ny demaokrasia. Fa izao, raha tsy tena takatry ny olona marina izay zava-nitranga tamin'ny lasa, hasina toy inona moa no homeny ny demaokrasia? Fomba ahoana no ahafahana manamafy rafitra demaokratika iray izay manafina ampahany amin'ny tantarany amin'ny vahoakany?
Misolo vava ny fametrahana ny Vaomieran'ny Fahamarinana ihany koa izy, toy izay nataon'ireo firenena mifanolo-bodirindrina amin'i Brezila:
Tena ilaina ny mampahatsiahy fa anatin'ireo firenena voakasik'ilay raharaha Operation Condor (fiaraha-mientan'ny fitondrana miaramila maro tany Amerika Atsimo, nahitàna an'i Brezila, Arzantina, Chile, Bolivia, Paragoay ary Orogoay, ho fandrindràna ny famoretana ny mpanohitra avy amin'ny elatra farany havia), i Brezila ihany no nanaiky ny Vaomieran'ny Fahamarinana.
Lehilahy iray ao anatin'ny tantara an-tsary Pau de Arara, nataon'i Carlos Latuff, under CC
Ediane Oliveira no mampahatsiahy antsika [pt] fa ny Fitsarana Momba ny Zon'Olombelona ao amin'ny Organization of American States (OAS) / Fikambanan'ireo Firenena Amerikana dia namoaka didy momba ny Famotsoran-keloka nandritra ny fitondrana miaramila tsy ara-dalàna [pt], sy ny hoe i Brezila dia tsy niraharaha io fanapahan-kevitra io:
Ny Fitsarana momba ny Zon'Olombelona ao amin'ny Organization of American States (OAS) dia nahatsapa ny maha-zava-dehibe ny hamantarana sy hanafaizana ireo mpampijaly tamin'ny fitondrana jadona miaramila, namoaka fanapahana fa mifanohitra amin'ny lalàna iraisam-pirenena ny fihazonana ny Lalàna Famotsoran-keloka izay nosoniavin'i Brezila. Saingy indrisy, manohy minia mikimpy amin'ilay fanapahan-kevitra hatrany ny governemanta Breziliana.
Nipetraka ho toy ny andrim-panjakana iray mihitsy ny fampijaliana tao amin'ity firenena ity satria ianao tsy afaka hanasazy fampijaliana aorian'ny namelana heloka ireo goaik'antitra mpampijaly teo amin'ny tantarantsika na koa hoe hamantatra azy ireny.
Thiago Beleza mampitaha [pt] ny fifandraisana misy eo amin'ny fampijaliana fahiny sy ny misy ankehitriny, any amin'ny biraon'ny polisy:
Ny tsy fanasaziana ireo mpamono olon'ny omaly dia azo antoka fa ho tsy fanasaziana ireo mpamono olona sy mpampijalin'ny anio. Mpiray tsikombakomba ny fitondrana.
Rodrigo Cárdia mampitaha [pt] ny zava-misy ao Brezila amin'ny any Arzantina, firenena iray izay nitsara ireo miaramila nahavita heloka bevava:
Arzantina, marina izany, dia nangirifiry tamin'ny jadona mafy lavitra miohatra amin'i Brezila. Tanatin'ny fito taona monja, nisy maherin'ny 30.000 no maty sy tsy hita popoka. Saingy tsy midika izany fa mendrika hohadinoina ny 21 taona nisian'ny fitondrana miaramila teto Brezila. Satria koa, teto, nisy ny fisamboranan ny fampijaliana, ny fanjavonana ary ny famonoana olona.
Amanditas dia manazava tsara [pt] mikasika ny zon'ireo nitondra faisana sy ny fianakavian'izy ireny :
Ireny fianakaviana notriarin'ny “fitondrana” ireny dia tsy azo tsinontsinoavina, ka hatao toy ny hoe niara-maty tamin'ilay “fitondrana”. Tsy nitsahatra hatreo akory ireny fianakaviana ireny: mbola eo ry zareo, miandry izay ho zo manavaka azy manokana: ny zony hitantara ny tantaran-dry zareo izay azy ireo madiodio.
Farany, Luka cmanazava tsara [pt]:
Ny fanokafana ny tahirim-bakoky ny fitondrana jadona miaramila dia tsy hoe fotsiny fanomezam-boninahitra ireo namoy ny ainy tamin'izany fotoana, fa koa fanehoana fa tsy hanaiky mihitsy isika ny mbola handany taona maro indray tsy hahalala vaovao mikasika ireo olona tsy hita popoka teto amin'ity firenena ity.
Pau de Arara no more [jereo ny sariitatra ery ambony].
Ny Holafitr'ireo Mpisolovava na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB – Order of Brazilian Lawyers) dia manana fanangonan-tsonia anaty aterineto hangatahana ny hanokafana ny tahirin-kevitra, sy nanomboka ny Fientanam-Pirenena Ho an'ny Fahamarinana sy ny Tadidy, miaraka amin'ireo mpisehatra malaza milalao ny toeran'ireo olon'ny elatra farany havia, maty na tsy hita popoka.